6 Mitambo uye Zvishandiso Mahara kune Yakatemwa Nguva (Ndira 22) | IPhone nhau
Kana uchangobva pamubhedha uye uchida kutora mukana weSvondo asi, nekuedza kushoma, nhasi ndinokuunzira nzira yakanakisa yekuzviita: ongororo yemimwe mitambo nemaapplication ayo, kunyangwe iwo achiwanzobhadharwa uye anoda isu kukwenya homwe dzedu, nhasi dzakasununguka kune vese. Usarasikirwa nemukana wekuvatarisa nekuti zvirokwazvo iwe uchafarira mamwe acho, uye zvirinani kuti iwe unogona kuudza mumwe wako kuti iwe wakatora mukana weSvondo mangwanani mune chimwe chinhu chakanaka 😂.
Asi sekugara kwandinoda kuyeuka nekuyambira, usakanganwa kuti zvese zvinotevera zvinopihwa, kukwidziridzwa uye kudzikiswa ndizvo Nguva Yakatemwa. Isu tinoziva kuti ivo varipo panguva yekutsikisa ichi posvo, asi isu hatizive kuti vachazobviswa riini sezvo vanogadzira vangangodaro vasina kuita izvi pachena. Nekudaro, zvisinei kuti une kusahadzika zvakadii pamusoro pekuti iwe kana kwete haungafarire imwe yeaya maapp kana magemhu, dhawunirodha kutanga uye funga gare gare, zviri mahara uye hazvizokutorere chinhu. Kurumidza kuwana iwo aunonyanya kufarira. Usavasiye vapukunyuke !!
3 Wonderoom HD Pro - Mufananidzo & Mufananidzo Mupepeti, Mafonti, Mafirita & Mafuremu
4 Bvisa vs Block II - NetBattle
5 Musica - Ad Yemahara Music yeSoundcloud MP3 Play.er
6 Mufananidzo Kudhinda 3.0
Lumiè ndeyekushandisa yekutora mifananidzo iyo iwe yaunogona kuisa Bokeh kana blur mhedzisiro kumifananidzo yako. Inoenderana ne iPhone, iPad uye iPod Kubata kubva kuIOS 8 uye inosanganisira zvimwe zvakawanda zvinoita kuti mifananidzo yako ive yakasarudzika: kuwedzera, kudzikisa, kutenderera, zvichingodaro. 121 mhedzisiro yemifananidzo yako.
Lumiè Iyo ine yakajairwa mutengo we1,99 euros zvakadaro, ikozvino unogona kuiwana zvachose mahara.
Rap Studio iri «Iyo isingafadzi nzira yekugadzira yako rap album». Iyo ine musanganisi wakazara, yakawanda mhedzisiro uye mukana wekunze kunze kuburikidza neMessage, YouTube, Facebook, email ...
Rap studio Iyo ine yakajairwa mutengo we2,99 euros zvakadaro, ikozvino unogona kuiwana zvachose mahara.
Wonderoom HD Pro - Mufananidzo & Mufananidzo Mupepeti, Mafonti, Mafirita & Mafuremu
Wonderoom HD Pro Ndicho pedzisa mufananidzo mupepeti neiyo yakachena uye yakapusa interface. Unogona kuendesa mapikicha kubva ku Instagram uye Flickr uye "gadzirisa ako mapikicha nemafuta akanaka, mhedzisiro, mafuremu uye mafonti."
Pamusoro pezvo, zvinongo chengetedza fambiro mberi yauri kuita mune ino gadziriso maitiro kuti iwe ugone kudzokera kune yapfuura vhezheni nekukurumidza, kana kuenderera kurudyi kwawakasiya nguva yekupedzisira.
Wedzera mafirita emwenje, mafirita evignette, anosvika pamashanu marudzi eblur, shanda pane toni uye ruvara rwechifananidzo nekugadzirisa kupenya, kusiyanisa, kuzadza uye mamwe akawanda mabasa.
Wonderoom HD Pro Iyo ine mutengo wenguva dzose we6,99 euros, zvisinei, kunyangwe isiri yemahara, ikozvino unogona kuiwana chete ma0,99 euros, saka usarasikirwa nayo.
Wonderoom HD Pro7,99 €
Bvisa vs Block II - NetBattle
Yasvika nguva yekukuratidza mutambo, unova unova Svondo. Unoyeuka Tetris ane mukurumbira here? Zvakanaka saka hazvidi kuti utsanangure kuti mutambo uyu uri nezvei, tese tatoziva. Chinhu chakanakisa ndechekuti ikozvino unogona kutarisana nemukwikwidzi, sekureba iwe uri pasi peiyo imwecheteyo netiweki yeWi-Fi. Ungatsunga?
Bvisa vs Block II - NetBattle Iyo ine yakajairwa mutengo we5,99 euros zvakadaro, ikozvino unogona kuiwana zvachose mahara.
Vimbai Vimbai II3,49 €
Musica - Ad Yemahara Music yeSoundcloud MP3 Play.er
Na «Music» unenge uine kuzara uye kushambadzira kwemahara ku SoundCloud, kuburikidza neyakanyanya kuchenesa, yakapusa uye inonzwisisika interface
Teerera kune chero rwiyo, albha kana odhiyo kurekodha iyo inowanikwa paSkycloud yemahara uye isina kushambadzira
Musica - Ad Yemahara Music yeSoundcloud MP3 Play.er Iyo ine yakajairwa mutengo we6,99 euros zvakadaro, ikozvino unogona kuiwana zvachose mahara.
Mufananidzo Kudhinda 3.0
Con Mufananidzo Kudhinda 3.0 unogona "chinja, negadziriro yeparutivi uye kugovana mavhidhiyo ako uye mapikicha (kusanganisira Mapikicha ehupenyu) muchivande, nekukurumidza uye nekugadziriswa kwakazara.
Iyo huru sarudzo yekusunungura nzvimbo pane yako iPhone kana iPad; Unogona kuendesa mifananidzo nemavhidhiyo kune yako Mac, Dropbox, Google Drive uye Flickr, uzvitumire neemail, neMessages kana "kungoteedzera pfupi URL kuti ugovane nayo uye uye paunenge uchida."
Mufananidzo Kudhinda 3.0 Iyo ine yakajairwa mutengo we2,99 euros zvakadaro, ikozvino unogona kuiwana zvachose mahara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » 6 Mitambo uye kunyorera mahara kwenguva yakati wandei (Ndira 22)
Hamado Music, mutambi wemimhanzi kubva mugore